🥇 ▷ Phil Spencer: «Kooxda way niyad jabtay soo bandhigida Xbox One» ✅
Phil Spencer: «Kooxda way niyad jabtay soo bandhigida Xbox One»
Ma aanan jeclayn sida ay Microsoft ugu soo bandhigtay qaabkeeda jiil ee hadda jira, Xbox One. Si kastaba ha noqotee, xogtu waa waxa ay si dhab ah u diraan oo ay u soo bandhigaan soo bandhigaan ama muujinta qormada waxay ahayd masiibo iyo dhagax ku dhawaad ​​hubinaya qaybta qaybta madadaalada oo dhan. Rabitaanka ah in lagu guuleysto hoolka ayaa ka yimid gacanta dadka Mareykanka, wayna yaryihiin ama ma ahan haba yaraatee wax macquul ah hadafyadooda.
Laakiin dib-u-eegiddan hore waxay umuuqataa inay qofkasta ka farxinayso, sumadda iyo mashiinka ayaa hada ku jira xaalad aad ufiican, sidaa darteedna waxaa layaab leh in Phil Spencer laftiisu uu dhabarka u weeciyay si uu ugu laabto wakhtigaas. In kasta oo uusan waligiis qayb ka qaadin eedda isla markaana uu hore u qirtay khaladaad kasta oo ay galeen, marna kuma dhaawacmo in la ogaado xog dheeraad ah.
Soo bandhigista ‘Xbox One’ waxay ahayd musiibo
Mar labaad, waxaan dib ugu laabanaa wareysigii aan la yeelannay Gamepot kaasoo cinwaanno badan ka sameeyay. Spencer wuxuu ka hadlay sida ay kooxdu dareemayso, xogtan ayaa laga yaabaa inay tahay wakiil dheeraad ah waxayna naga caawin kartaa inaan ka fikirno niyada shaqaalaha ka dambeeya TV-ga caanka ah, TV, TV, Isboortiga, Cayaaraha, Isboortiga…
Haddii aad soo noqoto oo aad daawatid muujinta, waxa aad aragto waa dhacdo runtii diiradda saartay Xbox sidii madal telefishan. Waxaan tusnaa waxyaabo ay ka mid yihiin Qiimuhu inuu Xaq yahay, tusaale ahaan. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in waxa ugu horeeya ee aan ku soo bandhignay Xbox One uu ahaa show telefishan.
Haddii aad shaqaale ka ahayd kooxda ‘Xbox’, markaa waxaad qayb ka ahayd koox kumanaan kun ah oo ka shaqeeyey Xbox. Laakiin waxaa jira dad aad u tiro yar oo kaamirooyinka hortooda ah, kuwaasoo aada masraxa si ay uga hadlaan badeecada. Waxaa jiri kara kala qeybsanaan fikradaha qaabka: “Maxaad sidan u tiri?” “Maaha sheyga aan dhisayo.”
Phil Spencer waa qof daacad ah
In kasta oo masraxa Phil Spencer, oo ahaa gudoomiye kuxigeenka Microsoft Studios, wuxuu soo bandhigay ciyaaro sida Quantum Break ama Halo 5: Ilaaliyeyaasha, runtu waxay tahay inuu sidoo kale ka mid ahaa guddiga agaasimayaasha. Taasi waa sababta ereyadan loo sii daayay madaxa fikirka qeybta, waxyeello badan marka aad aqriso sanadaha badan.
Faallooyinka aan ka helnay shaqaaluhu waxay ahaayeen: «Waxaan sanado badan aad uga shaqeynaynaynay badeecadan. Waad istaagtaa marxaladda dhacdadan waxaadna baabi’ineysaa dhammaan howlihii wanaagsanaa ee aan qabanay markii aan kahadalnay sheyga qaab aan si sax ah ula mid aheyn naftaada qalabka loo yaqaan ‘Xbox console’ iyo waxa ay macaamiisheenu raadinayaan.
Waxaan u maleynayaa in kooxdu ay ka niyad jabeen sababtoo ah waxay dareemeen niyad jab kooxda maamulka.
Haatan wax walbaa waxay ku jiraan taas, oo ah faalso wixii kahoreeyay ee runtii ka caawisay inay horumar sameeyaan. Laakiin waxay ahayd inay adkaato oo ay kacsan tahay in waqtigaas laga noolaado shaqaalihii Xbox.